We Fight We Win. -- " More than Media ": ဧပြီ (၁၇)ရက်နေ့မှာရွေးချယ်တော့မယ့် ကမ္ဘာ့သြဇာကြီးသူ ၁၀၀ရွေးချယ်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဲပေးကြပါစို့။
ဧပြီ (၁၇)ရက်နေ့မှာရွေးချယ်တော့မယ့် ကမ္ဘာ့သြဇာကြီးသူ ၁၀၀ရွေးချယ်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဲပေးကြပါစို့။
အောက်ပါ Linlk ကိုဝင်ရောက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် Definitely လုပ်ကြပါစို့။
နောက်တဆက်တည်း ပါဝင်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်လူထွက် သမ္မတကြီးအတွက်တော့ No Way ဆက်လုပ်ချင်သူများအတွက်အောက်ပါ Link ကိုသွားရောက်နိုင်ကြပါတယ်။
During last 50 years,all Mililitary
Govrnment Staffs become...
But the richest country (in Asia,1960)became the poorest in the world.
The country is still going down with great acceleration and momentum due to the GREAT pack of the wroung system of Miltary Government for 50 years since 1962(started by NAY WIN,the TEACHER of Military Gang)
Thein Sein was also one of Military Gangsters for2decades.
His past wroung mistakes still burning the country,making living standard of citizens more poor and poor.
Thein Sein. one of the worst CRIMINAL MILITARY GANGSTERS in Burmese History.